अबकाे भाेट बलात्कारीलाई कडा सजाय कबुल गर्नेलाई निर्मला, भागिरथी र सम्झनाहरूको आत्माले तबसम्म शान्ति पाउँदैन, जबसम्म उनीहरूका परिवारले उचित न्याय र बलात्कारी हत्यारालाई हदैसम्मको सजाय हुँदैन २ चैत, २०७८7min read Share
अनि नारी भएर जन्मिएकोमा अफसोच भयो समाज नारी र पुरुष दुवै मिलेर बन्ने हो, त्यसमा सुधार ल्याउनु नारीको मात्र ठेक्का होइन । परिवार र समाजको इज्जतका नाममा उनीहरूलाई कुनै पनि अधिकारबाट वञ्चित गराउन खोज्नु उचित होइन । २४ फागुन, २०७८ 12 min read Share
अंकल, यहाँ बचत उठाउन आउने केटीलाई लाेग्नेले मारेछ नि आमाको हत्या उसकी सानी छोरीको मुटुमा घाउ बनेर बसेको होला कि खत ? पक्कै घाउ होला । निको नहुने मार्मी बसेको घाउ । कसैले त्यो माम्री कोट्याइदिँदा, उप्काइदिँदा कति दुख्दो हो २१ फागुन, २०७८ 13 min read Share
मैले पनि खाएँ ढुङ्गा र पानीको फोहोरा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच बिजुलीबजारमा निकै बेर झडप चल्यो । प्रदर्शनकारीले प्रहरीकै अगाडि टायर बालेर नेतालाई गाली गर्दै थिए । त्यही क्रममा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको मलाई एक्कासि ढुङ्गाले छातीमा लाग्यो १८ फागुन, २०७८5min read Share
लिसाको तेस्रो बर्थ डे 'आज लिसाको तेस्रो जन्मदिन हो, केक पनि सानै छ' भन्दै ती महिलाले फ्रिजबाट केक निकालिन् । मनभरि 'बर्थडे गर्ल' ३ वर्षकी लिसालाई हेर्ने कौतुहलताले शिखर चुमिसकेको थियो । अब बर्थडे सङ गाउने र केक काट्ने भन्दै ती महिलाले आफूनजिकै बसिरहेको कुकुरलाई उचालेर काखमा राखिन् । अनि हामीले पनि ह्याप्पी बर्थडे सङ गाउन सुरु गर्यौं ७ फागुन, २०७८9min read Share
मिसलाई दिन ५० रुपैयाँमा लेखाएको प्रेमपत्र भाइले मिसलाई ९ बजे प्रेमपत्र हातमा दिएछ । १० बजे प्रेमपत्रसहित मिस मेरो घरमै ठोक्किन आइपुग्नुभयो । प्रेमपत्रको जवाफमा गुलाफको फूलसहित 'लभ यु टु' जवाफको आशामा बसेको मलाई मिसले त ‘ओइ सुकुलगुन्डा, दिदीजस्तो मिसलाई प्रेमपत्र लेख्छस्' भनेर गाली पो गर्नुभयो । २ फागुन, २०७८6min read Share
शिरमा चन्द्रमा बोकेर कसैले प्रेम प्रस्ताव राख्यो संसारका सारा राता गुलाफहरू तिमी आउने प्रतीक्षामा फुलिरहेको देखेँ । हेर मैले के देखेँ सपना ? हेर्दाहेर्दै लालीगुराँसका फूलहरूले पखेरा भरिए, ताकि तिम्रो शिरमा ताज बन्न पाऊन् । २ फागुन, २०७८4min read Share
साँच्चै, मैले किन बिहे गरिनँ ? मेरा बुबाले आँखा चिम्लेर असल महिला सम्झिनुपर्दा आफ्नी पत्नी सम्झनुहोला कि आफ्नै आमा ? विवाह गरेँ भने मैले असल भनेर मेरी बुढीलाई भनूँला कि आफ्नी आमालाई ? २६ माघ, २०७८ 13 min read Share
माइली दिदीको हातबाट छुटेको तारा मेरो हातमा माइल्दीको हात छ । माइल्दीको हातमा ‘स्टार’ । म सुस्तरी ‘स्टार’ छुन्छु र माइल्दीको मुहार हेर्छु । अहँ ! कुनै प्रतिक्रिया छैन । मुख आधा खुलेको छ । आँखाका कापबाट आँसु झरेका छन् । २४ माघ, २०७८ 13 min read Share
यादहरूको पनि सीमा रेखाप्रति लडाइँ हुन्छ होला नि है ? याद मात्रै त्यस्तो उपहार हो जसले आँखामा आँसु र ओठमा मुस्कान एकसाथ ल्याउँछ । कति याद जिन्दगीमा कोरिए, कति याद कोरिँदै छन्, कति याद कोरिन बाकिँ नै छन् । २२ माघ, २०७८7min read Share
मुन्धुम पदमार्गको आधा यात्रा केही महिना अगाडि स्विस राजदूत एलिजावेथ मुन्धुम पदमार्गको अवलोकन मा आउनुभएको थियो । उहाँ हाम्रै फाउन्डेसनमा बस्नुभयो । त्यसपछि था भो- मुन्धुम पदमार्ग त स्विस सरकारको सहयोग मा पो बन्दै रहेछ । त्यसपछि अझ मलाई जाने इच्छा भो । २२ माघ, २०७८ 40 min read Share
झरीहरूकाे गीति–यादनामा... धेरै मनुवा झरीका गनगने दिनहरूमा प्रेमी/प्रेमिकाको सम्झना गरिबस्छन् । यादका बोरिङ शृङ्खला दिमागमा चलाइबस्छन् र नोस्टाल्जिक भइजान्छन् । हिउँदे झरीका यी मसिना थोप्लाहरूमा यादहरूको बारिस हुन्छ । २१ माघ, २०७८ 10 min read Share
आच्छुछु..आज कति जाडो, आउनोस् चिसाेभित्रको मजा नियालाैँ हरेक जाडो हामीलाई अघिल्लो जाडोभन्दा बढ्ता जाडो नै लाग्छ । यसपालि पनि पहिलाभन्दा जाडो हो, ओके छ । तर, यसलाई हामी धेरै तरिकाले इन्जोय गर्न सक्छौँ २१ माघ, २०७८4min read Share
त्यो गोठ र मेरा बाको अन्तिम रात त्यो वर्षको भूकम्पले केही सयको जिन्दगी उखेल्यो । हजारौँको घर भत्कायो । हजारौँलाई घाइते बनायो । मेरो भने पूरै जिन्दगीको जग नै नमीठो गरी ढाल्यो १८ माघ, २०७८7min read Share
सुत्ने बेलामा नभई नहुने यो कस्तो अमर अम्मल ? सायद एसएलसीको तयारी गर्दैगर्दा हुनुपर्छ, काटेका गाँजाका बोट कोठाभरि सुकाइएका थिए । खै के सुर चलेर हो, एउटा चुरोट खाली गरेर पूरा भरेर सल्काएछु । त्यसपछिका ५/६ घण्टा बिताउन धेरै सास्ती ब्यहोर्नुपर्‍यो । १४ माघ, २०७८ 12 min read Share
बिरामी मान्छे हुन्छ कि याद ? जिन्दगीमा आफ्नो भनेको आफू मात्रै भइँदो रहेछ । बाँकी त बस्, तिमीले आफ्नो सोचे तिम्रोतर्फबाट आफ्ना हुन्छन् । उनीहरूको तर्फबाट बुझ्न त तिमी बिरामी नै हुनुपर्छ । १२ माघ, २०७८4min read Share
हिमालमा सबै जम्छ, हृदय जम्दैन याे रात चिसोले अम्खोराको पानी जमेको छ, हावामा शीत जमेको छ । पालीमा हिउँ जमेको छ । तर हृदय पग्लिरहेछ, मैनबत्ती जसरी । ८ माघ, २०७८4min read Share
माफ गर आमा, म शहीद भएँ आमा, मसँगै शहादत प्राप्त गरेका रंगेली, बेथरीका मेरा मित्रहरूले मलाई प्रश्न गर्दै छन्– सँगै र एउटै उद्देश्यका लागि बगाएको रगतमध्ये तिम्रो रगत पवित्र र मेरो रगत अपवित्र कसरी भयो ? ५ माघ, २०७८7min read Share
बाको अंग्रेजीमोह र ‘भुटानी मास्टर’को धुलाइ ओहो...! ‘भुट्निज मास्टर’ को त के कुरा गर्नु, ठाउँमै हानेर खुत्रुक्कै पार्ने । विद्यार्थी चुट्दा पनि क्रिकेट खेलको मज्जा लिएझैँ गर्थे । ज्यानलाई घोप्ट्याएर ‘छक्का’ भन्दै पछाडिपट्टि हानेको त्यो प्रहार सम्झिँदा अहिले पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ । ५ माघ, २०७८7min read Share